युगसम्बाद साप्ताहिक - गरे त हुँदोरहेछ नि ? - यादब देवकोटा
Saturday, 05.30.2020, 01:26pm (GMT+5.5) Home Contact
गरे त हुँदोरहेछ नि ? - यादब देवकोटा
Tuesday, 05.08.2018, 11:02am (GMT+5.5)
काम गर्नेले गफ नगरी चुपचाप गर्छ भन्ने सन्देश गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले दिनुभएको छ । उहाँ सिण्डिकेट तोडेरै छाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ । शुक्रबार यातायात व्यवसायी (वास्तवमा गैरसरकारी संस्थाका रुपमा चलेका)हरुले सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन यातायात बन्द गरे यसको असर उनीहरुमाथि नै प¥यो । सरकारले यातायात संघ, समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ मात्र गरेन उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाउने निर्णय ग¥यो । यातायात व्यवस्था विभागको कारबाहीलाई गृहमन्त्रीले साथ दिए, गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई प्रहरीले पालना ग¥यो । यो असल नियतले गरेको कामको नतिजा थियो ।
विभिन्न क्षेत्रका यातायात समितिका १५० जना पदाधिकारी पक्राउ परे र कतिपय आगामी दिनमा हड्ताल नगर्ने र सिण्डिकेट नचलाउने शर्तमा रिहा भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टाईको अभियानलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को दह्रो साथ रह्यो । गृहमन्त्रीको आदेशलाई प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले दृढतापूर्वक पालना गरे । यसअघि जस्तो ‘नीति–नियमले मिल्दैन, झन आन्दोलन कडा हुन्छ......’ जस्ता ओठे तर्क गरेर कोही पनि बसेनन् । जनताले खोजेको यही हो ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै थियो । सबैको एउटै रटान हुन्थ्यो ‘विद्युत उत्पादन छैन, कहाँबाट उज्यालो दिनु !’ तर जसै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ पुगे र ऊर्जा मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा– लोडसेडिङ कसरी र किन र कसले गराइरहेको छ भन्ने तथ्य खुल्यो, धमाधम कारबाही थालियो । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । कुलमानको अभियानलाई मन्त्री जनार्दनले साथ दिए । यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै सकारात्मक रुपमा प¥यो । औद्योगिक उत्पादन बढ्यो । आर्थिक वृद्धिदर पनि उकासियो ।
अहिले कुलमान र जनार्दनको साझेदारी जस्तै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायणाभट्टराई र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भएको छ । यी दुई मिलेर सिण्डिकेटको जालो तोड्ने कसम खाएका छन् । यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिण्डिकेट) तोड्ने अभियानले अहिले सिंगो देश गर्माएको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न चलेको कदमले आम जनताले लाभ त पाउने नै भए राज्यकोषमा पनि धन थुप्रिने भयो । यसअघि कसैले गर्न नसकेको काम अहिले तीन निकाय मिलेर गरेका छन् । गृहमन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रहरी प्रशासन । अब यसमा मिसिएको छ नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ।
सरकारले दिनुपर्ने सेवा नदिने अनि निजीले मनपरी गरे भनेर मात्रै पनि हुँदैन । यातायात क्षेत्रमा पनि अब सिण्डिकेट तोडियो भनेर मात्र हुँदैन । भोलि कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर पनि यो चल्दैन भन्न सकिन्न । पहिला सरकारले व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउन बाध्य हुने गरी कदम चाल्नुपर्छ । साझा यातायातलाई देशभर यातायात सेवा संचालनका लागि तयार गर्ने हो भने सिण्डिकेटको जालो तोड्न सिंगो राज्य लाग्नै पर्दैन । इतिहास साक्षी छ जतिबेला साझाका बस मेची–महाकाली कुद्थे त्यतिबेलाको अवस्था अर्कै थियो । जब माफियाको खेलमा फेर साझा सिध्याईयो अनि सुरु भयो एकाधिकार । यातायायात गैससहरुले चलाएको मनपरी धन्दाको अन्त्य हुने हो भने यो देशमा एकाधिकारवादी सबैको सातो जानेछ । यो क्रम सुरु भएको छ । सबैलाई सफलताको शुभकामना !
सिण्डिकेटको जालो अझै पनि मजबुत नै छ । यातायात संचालकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर बसेका छन् । उनीहरुको अबको दौड दलीय शक्तिको आडमा आफ्नो एकाधिकार कायमै गर्ने हुनेछ । यसलाई तोड्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन । यो भने निकै महत्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरु छन् । उनीहरु संघ र समितिको नाममा यातायातमा एकाधिकारा जमाइरहेका छन् । नेता पालेका छन्, नेताहरुलाई चाहिने ‘दादा’ पालेका छन् अनि आवश्यक परेका बेला खर्च पनि दिएका छन् ।
उनीहरुको हिम्मत यसैकारण बढेको हो । अब सिण्डिकेट वालाहरुका दलीय आबद्धता रद्द गर्नेे निर्णय सत्तारुढ दलबाट सुरु भयो भने यो अर्को ऐतिहासिक काम हुनेछ । विपक्षी दलमा आबद्ध भएकालाई कारवाही गर्ने र आफ्नो पक्षलाई काखी च्याप्ने हो भने यसको कनै अर्थ रहँदैन । मुलुक बनाउने हो भने अब राजनीतिक आस्था र संलग्नता हेर्न बन्द गर्नैपर्छ । केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ पूराा गरिदिएकै भरमा राज्यले त्यस्ताहरुको संरक्षण गरिरहने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।
अब भ्रष्टाचारीहरु, कर छली, कालोबजारी, मिसावट गर्नेहरुमाथि डण्डा बर्साउनु पर्नेछ । यति काम गर्न सकिए मात्र देशमा सुशासन कायम हुन्छ र सरकारले भनेजस्तै देश समृद्धिको दिशातिर जानेछ । कालोबजारी र तस्करी अनि हुण्डी देशको अर्थतन्त्र चौपट पार्ने कुकर्म हुन् । सुन काण्डले अहिले त्यही देखाइरहेको छ । कसरी र ककसको मिलोमतोमा सुन तस्करी हुँदो रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भैसकेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चार वर्षमा ४७ टन सुन तस्कर भएको तथ्य फेला परेपछि यो देशमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा कति हाँस्यास्पद रहेछ भन्ने पनि खुलस्त भएको छ । साढे ३३ किलो सुनका भरिया सनम शाक्यको हत्यापछि उत्खनन् भएका सुन तस्करीको जालो कहाँकहाँसम्म पुगेको छ अझै खुल्न बाँकी छ । सुन तस्करीका मुख्य नाइके अझै पक्राउ परेका छैनन् । यो दुई सन्दर्भले नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, गृह प्रशासन, व्यवसायीहरुको कालो कतुर्तत छताछुल्ल भएको छ । सबै मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक तथा अन्य जिम्मेवारहरु अहिलेको अभियान जस्तै लागिपर्ने हो भने देश उकासिन कतिबेर लाग्छ र ?
अब, यातायात क्षेत्रको जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र हवाई क्षेत्रमा मौलाइरहेको सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ । बजारमा चल्ने ‘कार्टेलिङ’बिरुद्ध आन्दोलन छेड्नुपर्छ । सेवाको नाममा यहाँ त गरीब जनता नै चुसिएका छन् । शिक्षामा राज्यको अथाह लगानी छ, तर जनताका छोराछोरी निजी विद्यालयमा जान बाध्य छन् । यसको कारण सबैलाई थाहा छ । अरुलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । सरकारी लगानीका शिक्षालयहरुको गुणस्तर वृद्धि गरेर जनतालाई विश्वस्त पार्नासाथ निजी विद्यालयहरु आफैं नियन्त्रणमा आउँछन् । सरकारी अस्पतालहरुले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा २४ सै घण्टा दिने हो भने निजी अस्पताला आफैं खुम्चिन्छन् । उनीहरुको मनपरी स्वतः हट्छ । त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको निकायले हवाई सेवा विस्तार गर्ने हो भने निजी वायुसेवाहरु स्वतः नियन्त्रणमा आउँछन् ।
यो सन्दर्भले के प्रमाणित गरेको छ भने एकजनाा व्यक्तिले मात्रै अठोट लिने हो भने ठूलै उथलपुथल ल्याउन सकिने रहेछ । सरकारका अन्य मन्त्रीहरुले पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि यस्तै अडान र अठोट लिएर अघि बढ्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन साँच्चै समय लाग्दैन ।